မူလနရော » Onsen Ryokan
Updated: 2016-03-09 16:19
ခုရော့ခ၀ ရေပူစမ်း ယူမဲ ရူးတန်း
ခုရော့ခ၀ ရေပူစမ်း ဟာ ခုမမိုတို ကို အလည် အပတ် လာ တဲ့ သူတွေနဲ့ အလုပ် နဲ့ လာ တဲ့ သူ တွေ မှာ နာ မည် ကြီး ပါ တယ်။ဧည့် သည် တော် တို့ ကို စိတ် ချမ်း သာ စေမယ့် အချိန် တို့ ကို ဖြတ် သန်း နိုင် စေ ဖို...
Updated: 2016-03-09 15:59
အာစိုး ဥချိမခိ ရေပူစမ်း စုစန်းဂေါ်
အာစိုး ဥချိမခိ ရေပူစမ်း စုစန်းဂေါ် ဟာ လူကြိုက်များ တဲ့ နေရာ တစ် ခု ဖြစ် ပြီး အာစိုးမှာ ရှိ တဲ့ အတွက် အလွန် ပင် အဆင်ပြေ လှ တဲ့ နေရာ တစ် ခု ဖြစ် ပါ တယ်။ ဧည့်သည် တော် တို့ ရဲ့ တန်ဖိုး ရှိ လှ တဲ...
Updated: 2016-03-08 16:50
လူကြိုက် များ တဲ့ နေရာ၊ မိနမိအိုဂု နိ မှာ ရှိ တဲ့ ခုရော့ခ၀စိုး ဟာ စီးပွားရေး သမားတွေ၊ အလည် အပတ် လာ တဲ့ သူ တွေ အတွက် အဆင် ပြေ ချော မွေ့ တဲ့ နေရာ တစ် ခု ပဲ ဖြစ် ပါ တယ်။ အဲ့ ဒီ နေရာ ကနေ မြို့ တွင်း ကို သ...
Updated: 2016-03-08 15:49
ဖုခိရ ဟိုတယ် ဟာ နာဂစခိ ကို အလည် လာ တဲ့ သူတွေ စီးပွားရေး သမား တွေ ကြား မှာ နာမည် ကြီး တစ် ခု ပဲ ဖြစ် ပါ တယ်။ဧည့်သည် တော် တို့ ကို ကောင်းမွန် တဲ့ အချိန် တို့ ကို ဖြတ် သန်း နိုင် စေရန် တွက် အထွေထွေ ၀န်ေ...
Updated: 2016-03-08 14:51
ပန်း နဲ့ အတူ ဧည်ဝတ် ကျေမှု တည်းခိုဆောင် ရှောအန်း
(ဂျပန် နိုင် ငံ ရဲ့ အဆင့် သုံး ဆင့် ရှိ လူချောရေပူစမ်း).ဥရဲရှိနို ရေ ပူစမ်း ရဲ့ ရေပျစ်ပျစ် တို့ က ဆိုဒီယမ် ဓါတ် တို့ အများအပြား ပါ ၀င် တဲ့ ရေပူ။အရေပြား နဲ့ လျို့ ၀ှက် နေရာ တို့ ကို ဆေး ကြော ပြီး ရေပူစ...